Iindaba - Yeyiphi eyona dayimani ibiza kakhulu kwihlabathi? Jonga ubuncwane obenze imbali yefandesi
Yintoni le dayimani ibiza kakhulu ehlabathini? Xa kungenakwenzeka ukufumanisa ixabiso, mhlawumbi singalibona ixabiso leringi yedayimani ngeyona dayimani ibiza kakhulu kwaye ibiza kakhulu kwimbali yefandesi. Ezi zenze umsesane wedayimani wembali kwimbali yefandesi. Intliziyo intle kwaye inxilile!
Iidayimani ezintlanu ezibiza kakhulu kwimbali yendlu yefandesi
Le ring yeGraff yedayimane etyheli, inobunzima be-100.09 carats, ekuqaleni yayingakwazi ukuvalwa ngenxa yeebidi eziphantsi. Emva kwexesha, xa indlu yefandesi yoSuthu yabhengeza ukuphinda ithengiswe idayimani, owona msitho ububaluleke kakhulu yaba lixabiso lokugqibela le-16.3 yezigidi zeedola ngoMeyi ka-2014. yezigidi zeedola zaseMelika, kwaye indlu yefandesi ikholelwa ukuba ixabiso "lihle", emva koku, ixabiso eliqikelelweyo ledayimane kwi-15-20-25 yezigidi zeedola zaseMelika phakathi.
Intwasahlobo ka-2017 yabanjwa ngorhatya lwesi-4 kwiNgqungquthela yaseHong Kong nakwiziko leMiboniso. I "Pink Star" ekulindelwe kakhulu- inobunzima obuyi 59.60 carats of ellipse interior flawless pink diamonds for about 553 million Hong Kong dollar (Inqaku lomhleli: malunga ne-490 yezigidi zeRMB renminbi transaction, ebeke irekhodi elitsha kwifandesi yedayimani umhlaba.
UChristie wathengisa idayimani eluhlaza okwesibhakabhaka eyi-14.62-carat nge-57,6 yezigidi zeedola eGeneva, eSwitzerland. Idayimani eluhlaza okwesibhakabhaka ethathwe ngumthengi ongaziwayo yayibizwa ngokuba yi-Oppenheimer Blue. Ixabiso eliphambi kwifandesi liqikelelwa kuma-3800. ~ 45 ezigidi zeedola zaseMelika, lelona gem likhulu lolu didi lokuthatha inxaxheba kwifandesi.
Nge-12 ka-Novemba ngo-2013, eyona dayimani inkulu e-orenji yathengiswa nge-US $ 31.59 yezigidi, kusetwa irekhodi ngexabiso leefandesi zedayimane ezifanayo. Le dayimani yeorenji yahlelwa yiAmerican Gemological Institute njengowona mgangatho uphezulu kwaye umbala wawo ngumbala o-orenji omsulwa. Olu hlobo lwedayimane lukwabizwa ngokuba "ngumlilo wedayimani" kwaye kunqabile ukuba luvele kwifandesi. Kunokuthiwa le dayimani yeorenji yaziwa Eyona inkulu yohlobo lwayo.
Ngo-Okthobha u-2013, idayimani emhlophe elliptical fender-colored color Type IIa diamond, enesisindo esiyi-118.28 carats, ekugqibeleni yathengiswa nge-30.6 yezigidi zeedola (HK $ 212 yezigidi) e "Hong Kong Sotheby's Magnificent jewelry and Jade jewelry jewelry Auction". Kunokuthiwa yenze irekhodi lefandesi kwihlabathi leedayimane ezimhlophe, kwaye iye yaba yenye yeedayimani ezibiza kakhulu kwaye zinzima kwimbali yeefandesi. Le dayimani imhlophe i-carat i-118 yenziwe ngomatshini ukusuka kwi-299 carats yedayimane ekrwada ekrolwe eMzantsi Afrika ngo-2011. Kuxelwa ukuba umthengi wale dayimani unamalungelo okuchaza igama.
Iifandesi ezisixhenxe zeJewellery kwiMbali yeJewelery
Umgexo weMaharani waseBaroda, eIndiya
Ixesha lokuthengisa: 1974
Asikokuzibaxa izinto ukuthi lelona dalo lubalaseleyo kwimbali yobucwebe. Ezilishumi elinantathu ezimile okweeperile zeemeraldi zaseColombia ezinobunzima obupheleleyo beekarati ezili-154 zinqunyanyisiwe embindini wedayimani emile okwe-lotus, kwaye zenziwe nge-emeralds nedayimani. . Eyona nto imangalisayo kukuba onke la matye anqabileyo athatyathwa kwisithsaba seGrand Duke yaseVadodda. UMaharani waseBaroda, owaziwa njengeDuchess yaseWindsor eIndiya, unomdla wezacholo. Kukho kuphela iziqwenga ezingamakhulu amathathu zokuqokelelwa kobucwebe. Ezinye zazo zibuye zibuyele kwixesha likaMughal.
I-brooch yeDuchess yaseWindsor
Ixesha lokuthengisa: 1987
UVan Cleef kunye noArpels, ngelixa besenzela i-Lady of Virgo eVaronda, e-India, basebenze noCartier ukwenza uthotho lobucwebecwebe beDuchess yaseWindsor. Oku kwaziwa njengeyona ngqokelela yezona zinto zixabisekileyo zenkulungwane yama-20. Emva kokusweleka kweDuchess yaseWindsor, ingqokelela yakhe yathengiswa ngaphezulu kwe-50 yezigidi zeedola. Ngomnyaka we-1940 uCartier wayehombise ubomvu, luhlaza okwesibhakabhaka kunye namatye aluhlaza kunye ne-citrine kunye needayimane zale bhroso ingummangaliso. UKing Edward VIII ngesisa wayinika umfazi wakhe amthandayo. Nangona wayenethemba lokususa i-brooch emva kokusweleka kweDuchess, akazange anyanzelise ukuba uza kuthatha ixesha elingakanani. Kwaye ixabiso lale broshi liqhubekile nokunyuka, kwaye liphindwe amaxesha asixhenxe kunoko bekulindelwe izigidi ezisixhenxe zeedola zaseMelika!
Umqala weNkosazana uSalimah Aga Khan
Ixesha lokuthengisa: 2004
Ayizizo nje iigugu zeDuchess yaseWindsor ezithi zifandelwe ngexabiso eliphezulu. Xa uSally CroCKer-Poole waba yinkosazana ngo-1969, waqokelela uthotho lobucwebecwebe. Kwaye ezi zacholo zafakwa kwifandesi emva kokuba eqhawule umtshato ngo-1995. Iifeksi zibandakanya umgexo kaBoucheron, izacholo zomqala zaseVan Cleef kunye ne-Eble kunye needayimani eziluhlaza ezimile okweentliziyo, zonke ezo zithengiswa ngamaxabiso aphezulu, aphantse abengamaxabiso eDuchess yaseWindsor's. Ifandesi yobucwebe.
Umqala kaMaria Callas
UMaria Callas, odume “ngoothixokazi” wakhe, yimvumi yeopera. Ubuntu bakhe obomeleleyo kunye nebali elibuhlungu lothando zihlala zigxila kwingxoxo yabantu. Unguthixokazi wokwenene, uhlala enxibe iiperile kunye nedayimani, naphina apho aya khona ukutsala umdla wabantu. Ingqokelela yobucwebe obuxabisekileyo bukaMaria Callas ibandakanya i-brooch yedayimane epinki eyathengwa ngo-1967, eyathengiswa ngefandesi ngoNovemba 2004 emva kokuba wasweleka kwiminyaka emininzi eyadlulayo. Ixabiso elipheleleyo kwifandesi yobucwebe lifikelele kwi-1.86 yezigidi zeedola zase-US.
INkosazana uMargaret Crown
Ixesha lefandesi: 2006
Ifandesi yobucwebe bePrincess Margaret ayinakuze ilibaleke ngokulula, ngakumbi emva kwenkulungwane emva kokuba izacholo zeKumkanikazi uVictoria zathengiswa ngo-1901. Ewe kunjalo, ingqokelela yasebukhosini engama-800 ka-Princess Margaret ngo-2006 nayo yayifumene imarike. IPrincess Margaret ibisoloko intle kwaye inomtsalane ngaphambi kokusweleka kwayo, ke zininzi iigugu ezixabisekileyo ukuze zibe nelungelo lokungena kusapho lwasebukhosini. Kubandakanywa ezinye iindlalifa zikaFaberge kunye noKumkanikazi uMariya, kunye nesithsaba esidumileyo sePoltimore awayeyinxibe kumtshato wasebukhosini ka-1960, wazalwa kwangoko nge-1870, kwinkulungwane eyadlulayo.
Iringi yeDayimani ka-Elizabeth Taylor
Ixesha lefandesi: 2011
Akukho fandesi yobucwebe inokutshatisa ulungelelwaniso lukaElizabeth Taylor. Ingqokelela yakhe yobucwebe yathengiswa kwifandesi emva kokujikeleza umhlaba inyanga yonke. Ukuba sicinga ukuba ukuthengisa kwangaphambili kwe-50 yezigidi zeedola zaseMelika bekumhle ngokwaneleyo ukudubula izandla ezimbi, ke awazi ukuba usebenzise ntoni ukuchaza i-137.2 yezigidi zeedola zaseMelika! Ubucwebe kwifandesi buquka umlingisi we-1968 uRichard Burton (URichard Burton wamnika iringi yedayimane, iyonke ziikharati ezingama-33.19. , kunye nomnye umqala waseBulgaria obomvu we-emerald onikwe nguRichard Burton.
Incwadana kaLily Safra
Ixesha lefandesi: 2012
Ngapha koko, ifandesi yobucwebecwebe kaLily Safra yenzeka kule minyaka idlulileyo. Iigugu zakhe kwifandesi zibandakanya iiruby kunye neerubhi zedayimani ezenziwe yiJAR Paris, ezinobunzima obumalunga ne-173.09 carats. Elona candelo lililo lenkqubo yefandesi kukuba yonke ingeniso inikelwe kwisisa, kuba uLily Safra akangomntu odumileyo kuphela kodwa nonesisa. Emva kwemitshato emine, ingqokelela yakhe yobucwebecwebe yayixabisa i-1.2 yezigidi zeedola, neyamenza waba ngomnye wabantu abazizityebi emhlabeni.
Amacici kaGina Lollobrigida
Ixesha lefandesi: 2013
UGina Lollobrigida akangomdlali weqonga wase-Italiya. Ukwayintatheli kunye nomkroli. Wayekwangoyena mdlali ubalaseleyo waseYurophu kwii-1950s kunye nee-1960s. Ngelo xesha, wayeyimpawu nje emnandi. Ngo-Meyi ka-2013, ingqokelela yakhe yobucwebe yathengiswa kwifandesi kwaye yabangela uvakalelo, ngakumbi kumacici kaPierre Boucherin Diamond Emerald aveliswa ngo-1964.
Isongo sikaHelene Rochas
Unyaka ka-2013 lelona xesha liphezulu leevenkile zentengiso yobucwebe, kwaye enye yezona zibalaseleyo yingqokelela yobucwebe bukaRosa, kubandakanya nesacholo segolide se-Nid d'Abeille René Boivin esinombala obomvu, isafire nedayimani. Ngandlel 'ithile, ikwacutha umgama phakathi kwabaqokeleli kunye noluntu oluphakamileyo lwaseParis kunye namava amancinci.
Ixesha Post: Sep-20-2018